Digital Patrika – धेरै मानिसले गहिराईमा पुगेर योग सिकेका छैनन् : योगी प्रकाश ढुंगाना
| Tuesday, 19 February 2019
धेरै मानिसले गहिराईमा पुगेर योग सिकेका छैनन् : योगी प्रकाश ढुंगाना
Feb 12, 2018digitalpatrikaअन्तर्वार्ता0
योगको जन्मभूमि नेपाल भएपनि योगको बारेमा अझैसम्म धेरै मानिसले गहिराईमा पुग्न नसकेको ठान्ने शान्ति योग आश्रमका अध्यक्ष योगी प्रकाश ढुंगाना र उनको समूहले शिवरात्रीको दिन देखि ११ दिन देशका विभिन्न स्थानमा गएर योग सिकाउँने कार्यक्रम छ । शान्ति योग आश्रम मच्छेगाऊँ, माधवराज सुमार्गी भवन पशुपतिनाथ, भक्तपुर, पोखरा,लुम्बिनीदेखि देवघाटसम्म गएर ११ दिन सम्म विश्व उत्सव मनाउँन लागेको शान्ति योग आश्रमका अध्यक्ष योगी प्रकाश ढुंगानासँग गरिएको कुराकानी :
तपाईले यो विश्व योग उत्सव किन गर्दै हुनुहन्छ ?
योगको जन्मभूमि नेपाल, शिवको जन्मभूमि, तपोभूमि, देवभूमि यहाँबाट योग विश्वमा फैलियो । त्यै कुरा फेरि आज संसारमा योग त गयो तर नेपालले त्यसको श्रेय पाएको छैन । त्यस कारणले विश्व योग उत्सव मनाएर, योगको तपोभूमि, शिवभूमि नेपाल हो । विश्वलाई चिनाउनु र विश्वको मानिसलाई नेपाल ल्याउनको लागि यो उद्देश्य साथ कार्यक्रम थालिएको हो ।
तपाईहरुले कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गरी कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो यो कार्यक्रम ११ दिनको हुनेछ । पहिलो दिन हामी शान्तियोग आश्रम मच्छेगाउँबाट आरम्भ गर्नेछौं । त्यसैगरी दोश्रो दिन पशुपति मन्दिरको प्राङ्गण सुमार्गी भवनमा कार्यक्रम गर्छाै । तेश्रो दिन भक्तपुरबाट पोखरा, लुम्विनी, देवघाट गरी जम्मा ११ दिनको कार्यक्रम गर्दछौं ।
तपाईले विश्वसामु योगको प्रचारप्रसार कहाँ कहाँ गर्नुभयो ? त्यहाँबाट अहिलेसम्म कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
मैले युरोप, अमेरिका, अष्टे«लिया लगायत सम्पन्न राष्ट्रहरुमा गएर योगका कार्यक्रम गरें र त्यहाँबाट पढ्नको लागि हाम्रो नेपाल काठमाडांैको मच्छेगाउँको शान्तियोग आश्रममा पढेर स्नातक सकेर आफ्नो देश गएर त्यहाँ स्कुल, अस्पताल तथा फिटनेसमा तालिम दिनहुन्छ ।
तपाईले शान्तियोग आश्रम कति वर्ष पहिला के परिकल्पनाको साथ स्थापना गर्नु भयो र अहिले त्यो कति पूरा भयो ?
कल्पना, एउटा योगको गहिराई योग त मानिसको शारिरीक स्वस्थ र मानसिक शान्तिको लागि पनि थेरापी पनि हो त्यो भन्दामाथि योग त साधना हो जीवनशैली हो भन्ने मलाई सानैदेखि लागेको थियो त्यै कुरा दिनको लागि मैले करिव १८ वर्ष पहिलाबाट शान्तियोग आश्रमबाट शिक्षा दिइरहेको छु र आफूले सिकेको कुरा सबैलाई बाँडेर योगको जन्मभूमि नेपालका बारेमा संसारलाई सिकाउँन चाहन्छु । अहिलेसम्म जुन गतिका साथ अगाडि बढेको छु म यस हिसावले सन्तुष्ट नै छु तर गर्न अझै धेरै बाँकी नै छ र त्यसका लागि नै मैले योग उत्सवको आयोजना गरेर अगाडि बढेको हुँ ।
तपाई आफै चाही योगप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो के कुराले तपाईलाई आकर्षित बनायो ?
स्कुलको जुन पढ्ने पद्धति थियो त्यो सैद्धान्तिक शिक्षाले मलाई तान्न सकेन । बास्तविक अर्थमा म को हुँ ? जीवन के हो ? जीवन कसरी जिउने यी र यस्ता कुरा जबसम्म जाँनिदैन तबसम्म सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्र जीवन बुझिदैन त्यो कारणले जब म स्कुलमै पढ्दा जीवन के हो ? बुझ्दै जाँदा म स्कुलदेखि नै योगको बारेमा जान्ने मौका पाएँ, अनि स्कुलको पढाईसंगै योग पनि गर्दै गए र स्कुलको पढाई पछि म पूरै योगमा समाहित भए ।
योगबारे बिभिन्न योगीहरुको आ—आफ्नै शैली छ भनिन्छ तपाईको आश्रममा चाहीँ कसरी योग सिकाइन्छ ?
मुख्य उत्सव र कार्यक्रम नै यही हो कि योग सुरु भएको करिव १० हजार वर्ष अगाडिबाट जब शिवजी र पावर्तीलाई योग सिकाउदा तपोभूमि पशुपतिको मन्दिरमा दिइयो । आज २१ शताब्दीमा पनि उस्तै गरि दिइने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । योगमा हुने आत्मीक ज्ञानको सदुपयोग गर्दै हामी अघि बढ्ने छौं । आज योगलाई बिभिन्न व्यक्ति र संस्थाले आ आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्नुभयो तर योगको जुन मर्म र चिन्तन छ त्यसलाई आम मानिसमा पु¥याउनु हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
अन्त्यमा, तपाई विश्व योग कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ आम मानिसमा तपाई के आव्हान गर्नुहुन्छ ?
यहाँहरु जो योगका बिभिन्न जस्तै हथ योग,अष्ट योग, मन्त्रा योग, कुण्डा योग,क्रिया योग, लय योग, नादेउ, मण्डल, कर्म लय, भक्ति, ज्ञान योगका बिभिन्न नामहरु छन्, ती योगको एक स्तर माथिल्लो अभ्यास गराउनेछांै । जसबाट विश्वभरिका मानिसमा योगको महत्व झल्किनेछ । यसबारेमा म मात्र होइन विश्वका ८÷९ राष्ट्रबाट अन्य योगीहरु पनि आउनु हुनेछ त्यसपछि योग भनेको के हो त ? मन्त्र के हो ? साधना के हो त्यसलाई हामी नयाँ ढंगले विश्वसामु सन्देश पुर्‍याउने विश्व योग कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।